Onye nkuzi mara ikpe ọnwụ maka r@ping ụmụ akwụkwọ iri na atọ – Carinsurancegeeks
Onye nkuzi mara ikpe ọnwụ maka r@ping ụmụ akwụkwọ iri na atọ
by Promise Foster · Published April 4, 2022 · Updated April 4, 2022
Na Mọnde, 4 Eprel 4, 2022, ụlọ ikpe Indonesia mara onye nkuzi ikpe ọnwụ maka iji ike dina na ụmụ agbọghọ 13 na ụlọ akwụkwọ islam, na-ekwupụta arịrịọ ndị ọka iwu maka ntaramahụhụ ọnwụ mgbe a tụrụ ya mkpọrọ ndụ.
Okwu onye nkuzi Indonesian, Herry Wirawan, emewo mba ahụ maa jijiji wee weta uche na mkpa ọ dị ichebe ụmụaka nọ n’ụlọ akwụkwọ ụlọ okpukpe site na ime ihe ike s8xual.
Ndị gbara akwụkwọ bụ ndị chọrọ ntaramahụhụ ọnwụ gbara akwụkwọ mkpegharị mgbe ụlọ ikpe dị na Bandung mara ya ikpe n’ụlọ mkpọrọ n’ọnwa Febụwarị.
“(Anyị) na-ama onye a na-azara ọnụ ikpe ọnwụ,” ọkàikpe ahụ kwuru na nkwupụta e bipụtara na weebụsaịtị Bandung High Court ‘s na Monday.
GỤỌ KWESỊRỊ: Foto Amos Yee n’ụlọ mkpọrọ US
Onye ọka iwu Herry, Ira Mambo, jụrụ ikwu ma a ga-etinye akwụkwọ mkpesa, na-ekwu na ọ dị mkpa ịhụ ikpe ụlọikpe niile .
Tupu ọ zaghachi, onye nnọchi anya ụlọ ọrụ ndị ọka iwu mpaghara kwuru na ụlọ ọrụ ahụ ga-echere mkpebi ikpe ikpeazụ, ka Reuters kwuru .
Ọkaikpe Yohannes Purnomo Suryo Adi kwuru na n’oge ikpe February na onye nkuzi Herry Wirawan s8xually chịkwaa ụmụ agbọghọ 13, ndị dị afọ 12 ruo 16, ma tụba mmadụ asatọ n’ime ndị o metụtara, ndị ụfọdụ n’ime ha merụrụ ahụ n’ihi mmeko nwoke.
“A mara Wirawan ikpe … nke mmejọ nke ime ihe ike n’ebumnobi na ịmanye ọtụtụ ndị metụtara mmekọahụ,” ọkàikpe ahụ gwara ụlọ ikpe dị na Bandung, West Java.
Ndị ọrụ ọchịchị na Indonesia, gụnyere minista na-ahụ maka nchekwa ụmụaka nke mba ahụ, akwadola oku a na-akpọ maka ikpe ọnwụ, n’agbanyeghị na kọmishọna na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ na mba ahụ, nke na-emegide ntaramahụhụ ọnwụ, kwupụtara na ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị.
Indonesia, mba ndị Alakụba kacha ibu n’ụwa, gụnyere iri puku kwuru iri puku ụlọ akwụkwọ ndị Alakụba na ụlọ akwụkwọ okpukperechi ndị ọzọ, bụ ndị na-abụkarị naanị ụzọ isi nweta agụmakwụkwọ ụmụaka sitere n’ebe ndị dara ogbenye.
Foto Amos Yee dị n’ụlọ mkpọrọ US dị n’elu ịntanetị
by Promise Foster · Published April 4, 2022
Instagram, Facebook, nke Russia machiri
Rudiger ga-ahapụ Chelsea na njedebe nke oge
by Promise Foster · Published April 30, 2022
Next story Instagram, Facebook, nke Russia machiri
Previous story Foto Amos Yee dị n’ụlọ mkpọrọ US dị n’elu ịntanetị
Goolu Pulisic gbagoro n’ikpeazụ ka Chelsea meriri West Ham ndị isi ike
Kalmar wucewa: Duba Me yasa mutane ke manta kalmar sirri
Elon Musk baya shiga hukumar Twitter
Yadda Ake Gano/Karanta Saƙonnin Deleted na Whatsapp
Carinsurancegeeks © 2022. All Rights Reserved.